ဆုံးစမဲ့ ကြည့်မှန် - ဝီကီပီးဒီးယား
နံရံအလှဆင်ရန်သုံးသော စဉ်ဆက်သုံး ဆုံးစမဲ့ ကြည့်မှန်
ဆုံးစမဲ့ ကြည့်မှန် (အင်္ဂလိပ်: infinity mirror) သည် နှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသော ကြည့်မှန်များကို အပြိုင်ဖြစ်စေ အပြိုင်နီးပါးဖြစ်စေ နေရာထားလျှက် ပေါ်လာသော ပုံရိပ်သည် အဆုံးဆမဲ့တစ်နေရာအထိ ပို၍ ပို၍ သေးငယ်သွားသည့်ဟန်ဖြစ်စေရန် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ဆုံးစမဲ့ ကြည့်မှန်၏ အရှေ့မှန်သည် တစ်ပိုင်းငွေရောင်ဖြစ် (တစ်ဖက်ကိုသာမြင်သော မှန်) နေတတ်သော်လည်း ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေရန်အတွက်တော့ မလိုအပ်ပေ။ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းများတွင် ဤအသွင်မျိုးကို ဒရော့စတာ အထူးပြုချက် (Droste effect) ဟူ၍ ခေါ်တွင်လာခဲ့ကြသည်။ ဆုံးစမဲ့ ကြည့်မှန်များကို ရံဖန်ရံခါတွင် အနုပညာလက်ရာများ (သို့) အခန်းတွင်း အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးပြုမှုတစ်ခုကို ထင်ရှားစေရန်အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ဆုံးစမဲ့ ကြည့်မှန် မြင်ကွင်းကို မှန်များကြားမှ မြင်ရပုံ။
ယခင်က စံအဖြစ်သုံးကြသော ဆုံးစမဲ့ ကြည့်မှန်ပါသောပစ္စည်းတစ်ခုတွင် မီးသီး၊ အယ်လ်အီးဒီ မီးလုံး (သို့) အခြားမီးထိုးနိုင်သောအရာများကို လုံးဝအလင်းပြန်သော() မှန်၏ အဖျားအနားတစ်လျှောက်တွင် ထားရှိကာ ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်သော တစ်ပိုင်းအလင်းပြန် (partially reflective) 'တစ်ဖက်မြင် မှန်' (one-way mirror) ကို ပထမမှန်၏ အရှေ့ ခပ်နီးနီးတွင် အပြိုင်သဘောမျိုးဖြင့် ထားရှိသည်။ အပြင်မှကြည့်သူတစ်ဦးက တစ်ပိုငါးအလင်းပြန်မှန်မျင်နှာပြင်ကို ကြည့်ရှုသောအခါအလင်းသည် ဆုံးစမဲ့စွာ မှောင်ဝင်သွားသည့်အထင်မျိုးပေးသဖြင့် မီးချောင်းများဖြင့် တစ်လျှောက်တပ်ဆင်ဖားသော ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနက်နက်တစ်ခု၏ အသွင်မျိုးထုတ်လုပ်ပေးသည်။
မှန်များကို အပြိုင်အနေအထား တိတိကျကျမရှိလျှင်နှင့် ယင်းအစား ထောင့်အနည်းငယ်မျှ စောင်းနေလျှင် ယခင်ဆိုထားသော ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမြင်ပုံစံသည် တစ်ဖက်သို့ အဆင့်ဆင့် အနန္တအထိ စွေသွားမည်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်မျိုးဆိုရလျှင် မှန်များစွာ (နေရာတကျ)တပ်ထားသော အခန်းမျိုး၊ အချို့သော ဓာတ်လှေကားများနှင့် အဝတ်စားလဲခန်းအချို့တို့မှာကဲ့သို့ 'လုံးဝအလင်းပြန်သည့် အပြိုင်ကြည့်မှန် နှစ်ချပ်' ကြား၌ ကြည့်ရှုသူက ရပ်၍ ကြည့်လျှင် အပေါ်၌ ဖော်ပြထားသော မြင်ကွင်းပြုလုပ်ချက်မျိုးကို မြင်နိုင်သည်။ အချို့သော အဆောက်အဦးများရှိ အဝကျဉ်းဖြတ်သန်းရသည့် အခန်း၏ ဖန်နံရံမှာကဲ့သို့ အပြိုင်ရှိနေသော အလင်းပြန်နိုင်သည့် မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားကို ရပ်၍ကြည့်ပါကလည်း ဤသို့သော အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပျော့ပျော့အသွင်မျိုးကို ရှုမြင်နိုင်သည်။ တစ်ပိုင်းအလင်းပြန် မှန်များသည် ဤအာရုံခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ကာ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ မှန်မှတစ်ဆင့် မြင်ရသည့်မြင်ကွင်း၏ မြင်ကွင်းအနှောက်အယှက် (visual noise) က အားပျော့စေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Gbur၊ Gregory J. (July 30, 2011)။ Infinity is weird… even in infinity mirrors!။ 2015-06-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Arduino-controlled RGB LED Infinity Mirror။ Autodesk, Inc.။ 2015-06-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grimes၊ William။ "Lights, Mirrors, Instagram! #ArtSensation"၊ The New York Times Company၊ December 1, 2013။ 2015-06-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆုံးစမဲ့_ကြည့်မှန်&oldid=530258" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။